တန်ဖိုးနည်းသည်၊များသည် မဆိုချင်ပါ။လိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်၊ စိတ်ချမ်းသာ တယ်ဆိုရင် ပေးရတာ..တန်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။အရစ်ကျသွင်းစနစ်နဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကော ပြည်သူတွေပါ အသုံးပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့..နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေမယ့်..တန်ဖိုးနည်းဖုန်းပေါ့ရှင်။
(တစ်သိန်းရှစ်သောင်းငါးထောင်နှုန်းနဲ့ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်မှာ စတင်ရောင်းချနေပြီလို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ - အချပ်ပို )
ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကြိုကြား၊ကြိုကြားမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ထိထိရောက်ရောက်လုပ်စေချင်ပါတယ်။ဒါမှ အားလုံး သိမှာ၊မြင်မှာပါ။အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်၊လူပန်းပြီး ပင်ပန်းရကျိုးမနပ်တာလည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
ဒါကတော့(ဘယ်တုန်းကတည်းက ခေတ်စားတာလည်းမသိပေမယ်) အင်မတန် ထိရောက်တဲ့နည်းပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ အောင်မြင်ပါတယ်း)။
လှိုက်လှဲပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက.. ဆက်သွယ်ရေး လိုင်းကောင်း ဖို့လည်း လိုအပ် ပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်းပြီး လိုင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် စိတ်ချမ်း သာသလို၊ အသက် လည်းရှည်လာ နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းအခေါ်မခံရလည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျေနပ်ပါတယ်။း)
"အမတော့ ငါးထောင်တန် ဖုန်းကိစ္စသဘောမကျဘူး။ငါးထောင်တန်ဖုန်းလိုချင်တာတော့ လိုချင် တာ ပေါ့။ ညီမဘဲစဉ်းစားကြည့်လေ..ဖုန်းဆိုတာ အရေးကိစ္စရှိရင်လွယ်လင့်တကူ သုံးလို့ရအောင် လိုအပ် တာ မဟုတ် လား?။အခုဟာက ဖုန်းတစ်ခါခေါ်ဖို့အရေး နာရီနဲ့ချီစောင့်နေရတယ်။နိုင်ငံခြား call wifi မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာ ပြည်တွင်းချင်းလည်းဒီလိုဘဲ။ အဓိက က ဆက်သွယ်ရေးကောင်း အောင်အရင် လုပ်ရ မှာ ငါးထောင်တန် ပေါ်လာလည်း ကြားရလား မကြားရ ဘူးလား ဘဲ ပြောလို့ရမှာ။နောက်ပြီး နိုင်ငံခြားကနေဖုန်းတခါခေါ်ရင် မြန်မာပြည် ဆိုမိနစ်အနဲဆုံးဘဲ။ဗိယက်နမ်တောင် 45 မိနစ်ရတယ်။မြန်မာက မိနစ်20 တဲ့လေ။အဲ့ဒါတွေ အရင်ပြင်ရမှာ။ခေါ်လိုက်တိုင်းသေချာကြားရပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးလိုင်းမိမိနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအိုကေမှနောက်ထပ်ဖုန်းတွေကို လူများများ အသုံးပြုနိုင်အောင်. လုပ်ပေးရမှာ။ငါးထောင်တန်ပေါ်လာရင် လူတွေအကုန်ဝယ်ကိုင်နိုင်ပြီ။
အဲတော့ဖုန်းအလုံးရေ ပိုများလာမယ်။ လိုင်းကလဲမလောက်။ဒါဆို...အခုထက်တောင်ပိုဆိုးမယ်။
ဖုန်းအလုံးရေများဖို့ထက် ဖုန်းတိုင်းလိုင်းကောင်းကောင်းမိဖို့ တာဝါတိုင်များများ လုပ်ပေးရမယ်။
ပြီးတော့မှ တဆင့်တက်ပြီး.. ဖုန်းအလုံးရေ ထပ်ထုတ်ရမယ်။အဲလိုစီစဉ်သင့်တာ။
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းပေါ်လာလည်း လိုင်းကအဓိကဘဲလေ။အမတော့ ဖုန်းများလာဖို့ထက် လိုင်းကောင်းလာဖို့ ပိုလိုအပ်တယ်ထင်တာဘဲ။အားလုံးကငါးထောင်တန်ဖုန်းဘဲလိုချင်နေကြတာဖုန်းတော့ခါးမှာချိတ်ထားပါရဲ့
ခေါ်လို့မရလို့လမ်းဘေးဖုန်းကနေ ပြောနေရရင် ဘာလုပ်မလဲလေ....."
jasmine(တောင်ကြီး) March 3, 2012 at 12:14 AM
ငါးထောင်တန်ထုန်းအပေါ် သမီးစံရဲ့ အမြင်လေးကိုလာရောက်ဖတ်ခဲ့ပါပြီ
မိုးဇက် March 3, 2012 at 12:21 AM
အမယ် မိစံ ကရေးမယ့်ရေးတော့လဲ ၊ ဂျယ်လီပစ်ပစ်ကို လူမိုက်ငှားသွားတာပဲ ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အမြင်ကို ထင်းထင်းလင်းလင်းချပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဝေ့ ............
မိစံလေး လိမ်မာလာတယ် ...........တိန်
ပစ်ပစ် March 3, 2012 at 1:07 AM
ဂျင် ဆန်း မီ
နင် ငါ့ ကို ဖွ တယ်... :P :D
ဟားဟားဟား ဆိုးတဲ့ အေးဂျင့်ဘဲ
ချစ်စံအိမ် March 3, 2012 at 1:35 AM
မေမြို့မိုး March 3, 2012 at 5:39 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 3, 2012 at 8:25 AM
နွေလ March 3, 2012 at 9:17 AM
ဘယ်လောက်မှ မပေးရတဲ့ ဖုန်းပဲလိုချင်တယ်
အလကားရရင် ရေတောင် ပါဆယ်ထုပ်တယ်
ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေသူ March 3, 2012 at 9:23 AM
အွန်း ....ပိန္နဲပင်က ကန့်လန့် ကန့်လန့် :P
လောလောဆယ် အားတေးဘူးနော် :D
shwewunyatana March 3, 2012 at 12:00 PM
ညီရဲ March 3, 2012 at 1:35 PM
မိုးငွေ့...... March 3, 2012 at 1:43 PM
အောင်အောင် March 3, 2012 at 5:36 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! March 3, 2012 at 6:09 PM
မိုးခါး March 3, 2012 at 8:53 PM
အင်းး ဖုန်းလိုင်းကတော့ အရင်ဆုံးကောင်းသင့်တယ် .. ပြီးတော့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ သုံးရဖို့လည်း လိုတယ် .. အဲ .. ဟမ်းဖုန်းနဲ့ သိပ်ပြောလွန်းတော့လည်း ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာလည်းစိုးရသေးတယ် .. (မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း :D)
လူတန်းစေ့ အသုံးလိုတဲ့အချိန်မှာ သုံးဖို့ ရှိသင့်တယ် လိုအပ်တယ်လို့ ထင်၏ သမန်စီးလေးရေး)
Mishell March 3, 2012 at 9:47 PM
Candy March 3, 2012 at 11:37 PM
ညိမ်းနိုင် March 4, 2012 at 12:05 PM
Z@! March 4, 2012 at 1:17 PM
မဟုတ်ရင် နာ့အကိုတွေ ပျိုရီးစံရဲ့ခရမ်းသီးမီးဖုတ်စားနေရအုံးမယ်းP
san htun March 5, 2012 at 12:17 AM
အလင်းသစ် March 5, 2012 at 7:27 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 5, 2012 at 9:45 PM
လူတိုင်း ဖုန်းကိုင်နိုင်ခြင်းဟာလည်း တိုင်းပြည်တိုးတက်ခြင်းရဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခုထဲမှာ ပါတာဘဲဟာ
ဒီတော့လည်း တာဝန်ရှိသူများက တိုးတက်အောင်လုပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါရဲ့
ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းဖုန်းကိုင်ထားပြီး ခေါ်မရတဲ့လိုင်းတွေဖြစ်မနေဖို့လည်း လိုသေးတယ်လေနော်.
ဂျယ်ရီပစ်ပစ်ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ်။း)
သဒ္ဓါလှိုင်း March 6, 2012 at 10:00 AM
အမြင်လေးကို လာဖတ်သွားတယ် သမီးစံရေ။ အမြဲလာအားပေးတတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ သမီးစံရဲ့ တဂ်ကို မရေးပေးနိုင်သေးတာ ဆောရီးပါလို့။
8Yar March 6, 2012 at 3:56 PM
aungmin March 7, 2012 at 10:12 AM
mstint March 8, 2012 at 9:37 PM
လူကသာသေးတာ ပညာကတော့မသေးပါလားကွယ်း)